नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : काठमाण्डौको एउटा अस्पताल जहाँ एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ ! पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है !!
काठमाण्डौको एउटा अस्पताल जहाँ एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ ! पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है !!
काठमाण्डौको मित्रपार्क चोकबाट गुह्येश्वरी हुँदै गएपछि कुमारीगालमा रहेको एउटा अस्पतालमा पुगिन्छ । बाँसबाट बनाईएको यो अस्पताल, वाहिरबाट हेर्दा कुनै कटेज होटल जस्तो चिटिक्क देखिन्छ । अझ, त्यसलाई चम्काउन गुलाबी रंग प्रयोग गरिएको छ । गेटबाट
छिर्ने बित्तिकै दायाँतिर डाक्टरको सूची देखिन्छ । बायाँतिर टिकट काट्ने काउन्टर छ ।
- समता अस्पताल काठमाडौँ फोन: 01-4114063